Ukubuyekezwa kukaKasamba - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubuyekeza kukaKasamba
Amaphuzu avelele eKasamba
Inikeza izinsizakalo eziningi ezingavamile ezifana neKabbalah, I Ching, ukufundwa kwe-aura, ngisho nemilingo yesilwane
Amanani aqala kancane njenge $ 1.99 ngomzuzu kwabanye abacebisi
The Kasamba Ibhulogi izihloko ezibhalwe yizimo zabo zengqondo ukuze bazi kangcono
Isingeniso esikhethekile sokusakaza kwe-50% ukuphuma kokufunda kwakho kokuqala kwengqondo
Inikeza ukubuyiselwa kwemali uma kuceliwe ngaphakathi kwamahora angu-72 wokubonisana kwengqondo uma ungenelisekile
Amaphrofayli kanye nokubuyekezwa kwengqondo ukukusiza ukhethe owodwa wokufunda
Inikeza izinsizakalo eziyingqayizivele ezingatholakali kwezinye izingosi zokufunda zengqondo, njengezifo zesilwane, ukufundwa kwe-aura, kanye nokupela
Imali ehlukahlukene yezindleko, ngamazinga aqala njengezinga eliphansi njenge $ 1.99 ngomzuzu
Kasamba yenza isiteji kubafundi abazimele be-psychic, ngaphandle kwenqubo yokuhlola
Amanye amazinga we-psychic reader aphezulu kakhulu njenge $ 19.99 ngomzuzu
Le mizuzu emithathu yamahhala yokukhushulwa imfushane kakhulu ukuze uthole ukuzwa okunembile kwe-psychic noma isevisi
Kasamba unikeza isiteji sama-psychics abazimele, ngakho-ke akukho inqubo yokuhlola. Eqinisweni, bayakhokhisa imali yokuzihlanganisa. Ngamasayithi wokufunda angokomqondo anjengalokhu, buyekeza ngokucophelela impendulo nobude besikhathi esebenza ku-Kasamba. Ungase uthole inhlanhla ngesifo esisha, eshibhile, kodwa kuyingozi kakhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izingosi, ezinemithetho eqondile yokuhlola, ngokuqinisekile lokhu kubaluleke kakhulu.
Ukukhetha i-Psychic enokwethenjelwa neyinkimbinkimbi
Isihlungi sabo sokusesha singakwazi ukuhlunga ama-psychics ngokulinganisa nokulinganisa, kodwa ngezingqondo eziningi kangaka ezibhalwe nale nkampani, kungase kube nokucindezela okwenza ukukhetha. Kasamba uye wafaka umfutho ekwandeni izifo ezintsha, ngakho-ke ithemba lokuthi inqubo yokusika izihlahla izothatha indawo yokuhlwanyela abanye abacebisi be-psychic ababuthakathaka.
U-Kasamba uye wakha ngokucacile isayithi labo ukuze ukwazi ukuthola ngokushesha indawo ofuna ukuyibuka. Isibonelo, uma ufuna "uthando lwengqondo" ungakhetha owodwa ngokukhethekile ngokuhlukanisa, ukuthandana, noma ngisho nokungathembeki. Yindlela elula yokudiliza ukusesha kwakho.
Amanani wabafundi be-psychic aqala ngo-$ 1.99 ngomzuzu, futhi angagijima aphezulu njengo-$ 19.99 ngomzuzu. Kasamba inikeza imizuzu emithathu yamahhala, kodwa uzobe uceliwe kahle ukuthi uphumelele ukukhuthazwa okungcono, ngoba ngeke uqale ukufunda ngokuqala ngemizuzu emithathu. Umfundi we-tarot, isibonelo, cishe uzothatha iminithi (noma ngaphezulu) ukuze uthole ukuthi uluphi uhlobo lombhalo oyifunayo, uphendule amakhadi, futhi uwaphathe. Qiniseka ukuthi uthole ukukhuthazwa lapho ungayazi khona ngempela isevisi ngesilinganiso esilinganiselwe. Uhlobo ngalunye lokufunda kanye ne-psychic ngayinye lithengiswa ngokuhlukile, kanjalo. ungakwazi ukuxhuma ku-paypal noma ufake imininingwane yekhadi lakho, futhi uzokhokhiswa ngokusho lokho okusebenzisa.
Kasamba ube nezindlela ezinhle kakhulu zokuxhumana. Futhi noma izindlela zokuxhumana ziyehluka ngokuthanda kwengqondo, uzothola izinhlobonhlobo zezingcingo, izingxoxo nezinketho ze-imeyili ezitholakalayo. Okusho ukuthi ungakhetha ukuthi ukhetha ukuthola kanjani ukufunda kwakho.
Uma ungajabuli nokufunda kwengqondo, thumela isicelo sokubuyisela imali ngaphakathi kwamahora we-72 kusukela ekupheleni kokufundwa. Ukwenza lokhu ngokugcwalisa "ithikithi lokusekela" kusikhungo sabo sesisombululo. Zonke izicelo ziyavunyelwa nguKasamba, kodwa akucaci ukuthi kungathatha isikhathi esingakanani.
Ngama-psychics amaningi ahlinzeka ngokukhethekile okuhlukile namazinga ahlukene wamanani, nakanjani uzothola umuntu ohambelana nesabelomali sakho nezidingo zakho. Kasamba linikeza ezinye izitifiketi ezingavamile, kodwa liye linye yezinsizakalo ezinkulu zokufunda ze-psychic emhlabeni, ngokugxila ekuvumela izimo zengqondo ukuba zizibeke ngokuzimela bese zisebenza ibhizinisi elizimele ngokusekelwa inkampani enkulu.